သွေးအားနည်းရောဂါကုသရန်4ထိုးခြင်း - သင့်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ »သွေးအားနည်းရောဂါကိုကုသရန်အတွက်4ထိုးဆေးများ - သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေခြင်း
Tele RELAY တစ်ခု2အောက်တိုဘာလ 2019
သွေးအားနည်းရောဂါသည်လူများစွာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကျန်းမာရေးပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားသောအကြောင်းတရားများသည်သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်စေသော်လည်းများသောအားဖြင့်သံဓာတ်စုပ်ယူမှုနည်းပါးသည်။ အချို့သောကူးစက်မှုများသည်သွေးအားနည်းရောဂါကိုကုသရန်ကူညီနိုင်ကြောင်းသင်သိပါသလား။
ထိုးသွင်းအများအပြားအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ သူတို့ကစိတ်ပျက်စရာအစာအိမ်ကိုသက်သာအောင်ကူညီပေးပြီးအရာ ၀ တ္ထုများအပြင်၊ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသံတွေပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးတယ်။ ဒီအရိပ်အယောင်အတွက်အကောင်းဆုံးပြုတ်ရည်အချို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဆောင်းပါးအရသိရသည် သံဓာတ်၏အာဟာရအခြေအနေကိုပြောင်းလဲစေသောအချက်များ - ဆေးဖက်ဝင်အပင်များတွင်ပါဝင်သော tannin ပါဝင်သည်သံဓာတ်၏စုပ်ယူမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတွင်အချို့သောပြုတ်ရည်များသည်အခြားသူများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းတွင်သံဓာတ်သင့်လျော်စွာစုပ်ယူခြင်းကိုတားဆီးပေးသောအက်စစ်အက်ဆစ်ပါဝင်မှုနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သံစုပ်ယူခြင်းကိုမြှင့်တင်သည့်အချိန်တွင်, အနည်းဆုံးတစ်နာရီခန့်အစာစားပြီးနောက်ပြုတ်ရည်ကိုစားရန်အထူးကျွမ်းကျင်သူများကအကြံပြုသည် ခန္ဓာကိုယ်ကသံဓာတ်ကိုအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်အောင်။ တစ်နေ့လျှင်တစ် ဦး ပြုတ်ရည်လောက်ပေ၏။
1 ။ စမုန်နက်၏ပြုတ်ရည်, သွေးအားနည်းရောဂါကုသရန်အကောင်းဆုံးပြုတ်ရည်တစ်ခု
၏ပြုတ်ရည် စမုန်နက် သွေးအားနည်းရောဂါကုသရန်အတွက်အကောင်းဆုံးပြုတ်ရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စမုန်နက်၏သိပ္ပံဆိုင်ရာအမည်မှာ Foeniculum vulgar ဒီမှာကပြုတ်ရည်ပုံစံနဲ့စားသုံးခြင်းရဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပေမယ့်၊ ငါတို့၏အချက်အပြုတ်ပြင်ဆင်မှုများတွင်ဤအစားအစာကိုတိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်.
ဤပြုတ်ရည်ကိုပြင်ဆင်ရန်သင်သည်စမုန်နက်အရွက် ၃၀ ဂရမ်နှင့်ရေတစ်လီတာလိုအပ်လိမ့်မည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းပြီးသည့်အခါသင်ပုံမှန်အားဖြင့်လေ့သို့မဟုတ်ပုံမှန်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ကဲ့သို့ပင်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်သာပြင်ဆင်ရမည်။
2 ။ ပူစီနံ၏ပြုတ်ရည်
Mint or mentha မီးဖိုချောင်များစွာတွင်အရွက်များကိုတွေ့ရသောကြောင့်ပြုတ်ရည်များတွင်အဓိကပါဝင်သည်။ Mint သည်အရှိန်မြှင့်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အစာခြေလုပ်ငန်းစဉ် အဖြစ်များသောအစားအစာများစားပြီးနောက်လေးလံသောစိတ်ကိုသက်သာစေရန်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါတော့မဟုတ်ပါဘူး။
Mint သည်သွေးအားနည်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောမဟာမိတ်တစ်ခုဖြစ်သည် ပူစီနံသည်သံဓာတ်များစွာပါဝင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ အနည်းဆုံးတစ်နာရီအစာစားပြီးလျှင်တစ်နာရီအတွင်းမွှေးကိုပြုတ်ရည်သောက်သုံးခြင်းသည်ကောင်းသည်။ လက်ဖက်အိတ်များကိုရွေးချယ်မည့်အစားအိမ်တွင်းသုံးပြုတ်ရည်ကိုပြင်ဆင်ရန်ပူစီနံရွက်များကို ၀ ယ်ခြင်းကအကောင်းဆုံး။ ထို့အပြင်တစ်နေ့လျှင်ခွက်နှစ်ခွက်ထက်မကသောက်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်: နေ့စဉ်အသက်တာ၏အသုံးအများဆုံးရောဂါများကို 13 ကိုတိုက်ထုတ်ရန်အကောင်းဆုံးပြုတ်ရည်များ
3 ။ သွေးအားနည်းရောဂါကုသရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောပြုတ်ရည်တစ်ခုဖြစ်သောသစ်ကြံပိုး၏ပြုတ်ရည်ကို
သွေးအားနည်းရောဂါကုသရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဆေးဖက်ဝင်အပင်များတစ်ခုမှာသစ်ကြံပိုးပြုတ်ရည်သို့မဟုတ် cinnamomum verum. ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ ဟင်းလျာများနှင့်အချိုပွဲများ၌တွေ့နိုင်သောဤအမွှေးအကြိုင်ကိုပြုတ်ရည်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။
သစ်ကြံပိုးခေါက်ရည်ကိုပြင်ဆင်ရန်သစ်ကြံပိုးခေါက်နှစ်ခုနှင့်ရေတစ်ခွက်လိုလိမ့်မည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများအတူတကွဖြစ်ကြပြီးတာနဲ့ရေကိုဆူအောင်တည်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောအခါသစ်ကြံပိုးခေါက်များကိုလှုပ်ပါ။ ထို့နောက်မိနစ်အနည်းငယ်မျှပြုတ်ပါ၊ ထို့နောက်အပူကိုပိတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ပြုတ်ရည်ယခုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
4 ။ Rosemary ၏ပြုတ်ရည်, သွေးအားနည်းရောဂါကုသရန်အကောင်းဆုံးပြုတ်ရည်တစ်ခု
Rosemary ၏ပြုတ်ရည်သို့မဟုတ် rosmarinus officinalis သံဖြင့်ကြွယ်ဝသောပြုတ်ရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမမှာလည်းအခြားဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၎င်းသည်အူသိမ်ဓာတ်ကိုသက်သာစေသည့်အပြင်အစာအိမ်ကိုပါစိတ်ဆိုးစေသည်။
လက်ဖက်အိတ်များကိုရွေးချယ်မည့်အစား Rosemary ရွက်များကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ်ပြုတ်ရည်ကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ကအိမ်မှာစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ပိုပြီးသဘာဝကျကျနှင့်လည်းပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးသည်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်: သဘာဝကျကျသွေးလွှတ်ကြောရှင်းလင်းဖို့5ဆေးဖက်ဝင်အပင်များတာဟာ
သင်ကသွေးအားနည်းရောဂါကိုကုသရန်အကောင်းဆုံးပြုတ်ရည်စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယခုပင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါမလုံလောက်ဘူး ... သံဓာတ်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုပါထည့်သွင်းခြင်းသည်ကောင်းပေသည်.
ဆောင်းပါးကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးအဖြစ် သွေးအားနည်းရောဂါferropénica၏prevención para hierro y ကဗီတာမင်စီ၏အရေးပါမှုအောက်ပါအစားအစာများသည်သံဓာတ်များစွာပါဝင်သည်။
လည်း, အစာစားချိန်အတွင်းဝိုင်ဖြူတစ်ခွက်သောက်ခြင်းသည်သံစုပ်ယူမှုကိုတိုးတက်စေသည် စီရီရယ်နှင့်စက်ရုံမှထွက်သောအစာများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, တစ် ဦး ထက်ပိုသောစပျစ်ရည်ကိုသောက်ရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။
ဤတစ်ကြိမ်တွင်ဤအချက်ကိုအလေးအနက်ထားရန်အရေးကြီးသည်မှာဖော်ပြပါအင်ဆူလင်များသည်အစားအစာအပြီးတွင်စားသုံးရမည်ကိုသတိရပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် - သင်သံစုပ်ယူခြင်းကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသံကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိရပါ။ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးသူ၏အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာရန်လည်းသတိရပါ။ သင်၏သံအဆင့်ကိုတည်ငြိမ်စေရန်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။
အချဉ်ဖောက်ထားသောအစားအစာများကို အခြေခံ၍ အစားအသောက် - အဘယ်ကြောင့်၎င်းကိုသင်၏အစားအစာတွင်ထည့်သွင်းသင့်သနည်း။
လူတစ် ဦး ၏အစားအစာတွင်အချဉ်ဓာတ်ပါဝင်သောအစားအစာများထည့်ခြင်းသည်ကောင်းပါသလား။ ကျနော်တို့ထင်သောအရာကိုအောက်တွင်ရှင်းပြ! Read more »